Ngaba ishishini lakho lithatha iVidiyo yeNtlalontle? | Martech Zone
Ngaba ishishini lakho lithatha iVidiyo yeNtlalontle?
NgoMvulo, Septemba 15, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngale ntsasa sithumele Kutheni le nto iShishini lakho kufuneka ulisebenzise kwiVidiyo xa uthengisa. Indawo enye yokusetyenziswa kwevidiyo eqhuba ukubandakanyeka okumangalisayo kunye neziphumo ziindawo zevidiyo zentlalo, ezinokunyuka okukhulu ekusebenziseni nasekujongeni. Iinkampani zisebenzisa la macebo kwaye zivelisa iziphumo ezilula nezimangalisayo ezijongwa ngakumbi, zabelwane ngakumbi, kunye nokuqhuba ukuqonda okunzulu ngophawu lwazo kunye namazinga aphezulu okuguqula.
Ngaphandle koko Youtube, maninzi amanye amaqonga evidiyo. Vine, bedlalaIiGoogle + Hangouts kunye Instagram Zonke iindawo ezintle zokwabelana ngevidiyo kwaye zithathe inxaxheba kwinkalo yentengiso ye-e kunye nee hashtag kunye nemeta-yolwazi. Ngena kwihlabathi levidiyo yentlalo namhlanje! Nxibelelana nabantu ngelixa usongeza kwingxoxo ekhoyo kwinkampani yakho kunye nophawu lwentengiso olunokuphindaphindeka, kumnandi kwaye kusebenze. UMegan Rigger, ukuThengiswa kweSigma kwiWebhu.
Ezinye iinkampani ezinkulu zinokulingwa bamba ividiyo ngokwakho kodwa ngekhe siyicebise loo nto. Nalu ulwahlulo lweendawo eziphezulu zevidiyo zentlalo kunye neenkcukacha-manani zabaphulaphuli ezihambelanayo. Ngotyalo-mali olukhulu, ungoyisa imiceli mngeni yokubamba- kodwa awusoze ulifumane ithuba labaphulaphuli kwezi ndawo zibonelela ngazo:
Youtube Yeyona ndawo yesibini etyelelwayo emhlabeni kunye neyesibini ngobukhulu enjini yokukhangela- ngaphezulu kwe-1 yezigidigidi yondwendwelo lwenyanga kunye nangaphezulu kweebhiliyoni ezi-6 zevidiyo ebukelwe inyanga nenyanga.
bedlala ibonelela ngamashishini ngenye indlela enomtsalane kwiYouTube. Indawo ezingaphezulu kwama-250,000 zisebenzisa iVimeo.
I-Hangouts zikaGoogle zisandula ukufakwa kuGoogle Apps kwaye yindlela elula yokwabelana ngeedemo kunye nodliwanondlebe, emva koko wabelane ngazo kamva.
Instagram iqalile njengendawo yokufota kodwa ngoku ixhasa ividiyo. Ngo-Okthobha ka-2013, iipesenti ezingama-40 zeevidiyo ekwabelwana ngazo kakhulu zenziwe ziimpawu.
Vine luhlobo lwe-Twitter yevidiyo (kunye ne-Twitter), evumela ukuba iividiyo ezimfutshane zabelwane ngazo. Abanabo ubomi obude, nangona!
tags: ii-hangouts zeGoogleinstagramyokuthengisaividiyo yentlaloividiyo yentlalo yeshishinibedlalaIntengiso ye vimeoumdiliyaintengiso yomdiliyayoutubeUkuthengisa kwi-youtube
Iinjongo zeNtengiso yedijithali ye-B2014B ka-2, uHlahlo lwabiwo mali, imisebenzi kunye nemiceli mingeni
Ikunceda njani i-Twitter ukuqhuba ukuBandakanyeka nzulu
Sep 16, 2014 ngo-12:49 PM
Onke amashishini kufuneka asebenzise intengiso yevidiyo Ndivuma i-100%! Ndineeblogi ezininzi ezigxininisa le ngongoma. Akufuneki kuphela ukuba ukuthengiswa kwevidiyo kube yenye yeendlela zakho eziphambili zokubhengeza kodwa ukwazi ukwenza ngokufanelekileyo ezo vidiyo ukuze zibe zizityebi kumxholo kwaye zilungiselelwe i-SEO.Akufuneki kuphela ukuba amashishini athathe ixesha lokuthengisa ividiyo kufuneka enze iividiyo zabo. ilungelo okanye iividiyo zabo kunye/okanye ishishini alisoze libonwe. Isithuba esihle kakhulu kwintengiso yevidiyo!